Xukun lagu riday Saraakiil Kenyan ah oo dilay Haweeneey Soomaali ah | Dayniile.com
Home Warkii Xukun lagu riday Saraakiil Kenyan ah oo dilay Haweeneey Soomaali ah
Xukun lagu riday Saraakiil Kenyan ah oo dilay Haweeneey Soomaali ah
Maxkamadda Sare ee Ismaamulka Garissa ee gobolka Waqooyi-bari Kenya ayaa10 sano oo xabsi ah ku xukuntay labo sarkaal oo booliiska Kenya ka tirsan, kuwaas oo lagu eedeeyay inay saddex sano kahor Cabdiya Cumar Aadan ku dileen deegaanka Ramu ee Ismaamulka Mandheera.
Labada sarkaal oo lagu kala magacaabo Denis Langat iyo Kennedy Okuli ayaa markii uu dilku dhacay la soo taagay maxkamad, balse maxkamadda oo eegeysa xaalado gaar ah sida halka uu dilku ka dhacay ayaa go’aansatay in dilkaasi uusan ahayn mid ula kac ah.
Labada sarkaal ee dilka geystay ayaa kaddib la soo xiray, waxaana la soo taagay Maxkamadda Sare ee Garissa, iyadoo markii dambe damaanad lagu sii daayay.
Sida uu qoray wargeyska The Star ee Kenya ka soo baxa, baaritaan lagu sameeyay meydka Cabdiya ayaa wuxuu muujiyay inay u dhimatay dhiig-bax ka dhashay rasaastii lagu dhuftay. Rasaaska ayaa Cabdiya kaga dhacday qoorta waxayna ka baxday dhabarka.
Previous articleDhimasho & dhaawac ka dhashay weerar ka dhacay Kenya
Next articleWafdi ka socda Dowladda Soomaaliya oo gaaray Baydhabo
Haddii aad ku dhex lugeyso magaalada Hamtramck ee gobolka Michigan waxaad dareemeysaa sidii inaad dalxiis ku mareyso caalamka. Dukaan lagu iibiyo cuntada Polish-ka iyo foorno...